Biden Anodaidza maRepublicans 'Asina Hanya' Pamusoro Pechikwereti Chichiwedzera - lesmeilleursastuces.com
Biden Anodaidza maRepublicans ‘Asina Hanya’ Pamusoro Pechikwereti Chichiwedzera
WASHINGTON – Mutungamiri Biden vakafadza maRepublicans neMuvhuro nekuvharidzira kwavo bato kuedza kukwidza chikwereti masvondo mashoma hurumende isati yatariswa, vachidana maitiro avo “asina hanya” uye “anonyadzisa” uye vachiyambira kuti vari panjodzi yekukonzera “ronda rekuzvikuvadza iro rinotora hupfumi hwedu. pamusoro pemawere. ”
VaBiden, kuyedza kuendesa njodzi kumaAmerican ezuva nezuva, vakayambira kuti vanogona kuona mhedzisiro svondo rino kana Seneti maDemocrat vasina kukwanisa kuvhota kukwidza muganho wechikwereti. Iyo cap inoraira huwandu hwemari iyo hurumende inogona kukwereta kuzadzikisa zvisungo zvayo zvemari, kusanganisira kubhadhara Social Security cheki, mihoro yevashandi vemauto uye zvimwe zvikwereti.
“Pangosvika svondo rino, mari yako uye homwe yebhuku rako inogona kukanganiswa neRepublican stunt,” vakadaro VaBiden, vachinyevera kuti vhoti yakakundikana inogona kudzikisira misika yezvemari, ichitumira mitengo yemasheya yakaderera nemitero yemitero yakakwira. “Chokumusoro chakanangana nehupfumi hwedu.”
Zvisinei nekuedza kwaVaBiden kupa mhosva maRepublican nekuda kwekukanganisa, maDemocrat ari kuramba achisangana nemukana wekuti vangangoda kukwidza muganho wechikwereti kuburikidza nenzira imwechete yemutemo iyo maRepublicans akasiya akazaruka: maitiro anozivikanwa sekuyananiswa kwebhajeti anodarika musangano weSeneti. VaBiden nevatungamiriri veDemocratic vakashushikana nenzira iyi, vachiti maRepublicans ane chikamu chekutarisira kushomeka kwebhajeti kuWashington uye vanofanirwa kubvumidza vhoti kumusoro-kana-pasi, sezvakaitika panguva yemutungamiri wekare.
Vavaki vemari muzvikwereti zvehurumende yeUS vatove kupazwa: Zvibereko zvemamwe mabhaimari eHurumende ayo anogona kukanganiswa nekukanganisa kwakasvikwa nemusi weMuvhuro, sezvo varimari vaida mhindu yemubhadharo kuti vabvise njodzi.
Dhipatimendi reHaimari rakayambira United States kuti ichapererwa nemari yekubhadhara zvikwereti zvayo zvese Gumiguru kana chikwereti chekukwereta chikasakwidziridzwa, mamiriro anogona kumanikidza hurumende kuti itadze uye nekuparadza hupfumi hweAmerica hwatozununguswa ne coronavirus.
Mateki akasimba emutero wechikwereti anowedzera mwero wekukoshesa kune icho chave chiitiko chisingaperi chezvematongerwo enyika brinkmanship muWashington. VaBiden nevemakongiresi ekongiresi vanoti maRepublicans ari kuisa hupfumi hwese panjodzi nekuvharira vhoti reSeneti iro raizokwidza muganho wechikwereti nerutsigiro rweDemocrat chete. MaRepublican, avo vakabvumidza mavhoti akadai kuitika munguva yakapfuura, vakavharira maDemocrat kaviri kutora bhiri uye vari kuyedza kumanikidza bato kuti rishandise kuyananisa, inova nzira yakaoma zvikuru inogona kutora vhiki kana kupfuura kuti iungane.
NeMuvhuro, mutungamiri wenyika akati aisakwanisa kuvimbisa kuti muganho uchakwidziridzwa.
“Zviri kuna Mitch McConnell,” VaBiden vakadaro, vachidudza seneta weKentucky nemutungamiriri wevashoma. “Handitende. Asi ndinogona kuvimbisa izvozvo? Dai ndaigona, ndaigona, asi handikwanisi. ”
Kutaura kwemutungamiri wenyika kwakawedzera kusawirirana naVaMcConnell, avo nemusi weMuvhuro vakatumira tsamba kuna VaBiden vachitaura kuti havazoregi kushandisa filibuster kudzivirira vhoti yedare reSenate uye kuti basa raive paDemocrat kutsvaga mhinduro.
“Ini ndinoremekedza ndinotumira kuti inguva yekuti iwe ubatanidzane nekongiresi yeDemocrats pamusoro penyaya iyi,” VaMcConnell vakanyora mutsamba kuna VaBiden. “Vatungamiriri vako muCongress vanofanirwa kunzwisisa kuti haudi kuti hurumende yako yakabatana yeDemocratic irarame ichienda kunjodzi inodzivirirwa pavanenge vawana chiziviso chemwedzi mitatu kuti vaite basa ravo.”
Vatungamiriri veDemocratic muSeneti, pamwe naVaBiden, vakapopota nemaonero aVaMcConnell, vachiti maRepublicans vane mutoro wekubvumidza kushandisa mari izvo zvava kuda kuti hurumende ikweretese, uye havana kodzero yekumira munzira yesarudzo yeSeneti.
“Sei? Nei tiri kuita izvi? ” Senator Richard J. Durbin weIllinois, iyo No. 2 Senate Democrat, akadaro neMuvhuro. “Nekuti McConnell anoda kutaura.”
Sénata Jon Tester, Democrat weMontana, achiratidza kushushikana, akataura kuti brinkmanship “inotaura nezve kuparara kwakaita nyika ino.”
“Ndiri kureva kuti kupenga – tiri kupa nzira yekuzviita, kwaasingafanire kuve nenhengo dzinoivhotera, uye akati hazvina kukwana,” VaTester vakadaro. “Zvinofanira kunge zviri pamutemo uyu kana kuti tabuda.”
Sénata Chuck Schumer weNew York, mutungamiri weruzhinji, akaudza maDemocrat kuti bhiri raizokwidza mutero wechikwereti raizoda kusvika padhesiki raVa Biden mukati memazuva, kwete mavhiki, ndokutyisidzira kubata nhengo muWashington mukupera kwesvondo uye kukanzura zviri kuuya. zororo kuzviita.
“Rega ndijekese nezve basa riri pamberi pedu: Tinofanira kutora bhiri kutafura yeMutungamiri rinotarisana nemuganhu wechikwereti kupera kwevhiki. Nguva. Hatina hunyanzvi hwekumirira kusvika Gumiguru 18, ”akanyora kudaro a “Mudiwa shamwari” tsamba yakanyorwa Muvhuro.
VaMcConnell vakaburitsa pachena kuti danho reRepublican rekufotera vhoti raitungamirirwa nezvematongerwo enyika. Vakataura mavhoti akapihwa naVa Biden vachikwikwidza kukwidza muganhu wechikwereti pasi pevaimbove Mutungamiri George W. Bush, izvo vakati “zvakaita kuti maRepublicans azviite isu pachedu.”
“Bipartisanship haisi switch yechiedza iyo Mutauri Pelosi neMutungamiri Schumer vangangobhenekera kukwereta mari vobvarura kuti vaishandise,” Mr. McConnell akanyora. “Kwemwedzi miviri nehafu, takangoyambira kuti sezvo bato rako richida kutonga roga, rinofanira kubata muganho wechikwereti wega.”
Vatungamiriri vehutungamiriri nevatungamiriri veDemocratic vanocherekedza musiyano mukuru pakati pemavhoti ari pasi paVaBush neavo varipo iye zvino: MaDemocrat haana kunyora mavhoti aya, vachibvumira maRepublicans kuunza bhiri pasi uye kukwidza muganho vega.
Nemukana iwoyo uri munjodzi, vakuru vehutungamiriri nevatungamiriri vemakongiresi vari kusefa zvakavanzika pasarudzo dzebato kana VaMcConnell vakasasuduruka uye vhoti ikakundikana. Kana izvo zvikaitika, VaBiden vanogona kusangana nedzvinyiriro yakawedzerwa yekuti VaSchumer nevamwe vatungamiriri vemapato vashandise kuyananiswa kwebhajeti.
Maitiro ekuyananisa angangosanganisira marathoni maviri evhoti yezvematongerwo enyika anogona kuwedzera chikamu chezuva. MaDemocrat anoti hapana vimbiso yekuti maRepublicans haazodhonze mavhoti aya kuti akonzere kusagadzikana kwemaitiro nezvematongerwo enyika.
Nzwisisa iyo US Chikwereti Ceiling
Kadhi 1 re8
Ndeupi muganho wechikwereti? Muganhu wechikwereti chivharo chemari yose inobvumirwa nehurumende yemubatanidzwa kukwereta nemabhiri eU.S. Treasury nemabhondi ekuchengetedza kuzadzisa zvisungo zvemari. Nekuti iyo US inomhanyisa kushomeka kwebhajeti, inofanirwa kukwereta mari hombe yemari kubhadhara mabhiri ayo.
Muganhu wechikwereti uchaputswa rini? Nehunyanzvi, iyo US yakarova chikwereti chayo kupera kwaKurume. Treasury Secretary Janet Yellen anga achishandisa “zvisingaenzaniswi matanho” kubva ipapo kunonoka kutadza. Yellen akayambira nezve “zvine njodzi” mhedzisiro kana muganho wechikwereti usati wakwidzwa kusati kwaraswa, izvo zvinofungidzirwa neHaimari kuti zvichaitika muna Gumiguru 18.
Ndeipi iyo mhedzisiro? Amai Yellen vakaudza Congress kuti kusaita chinhu kunogona kukonzera hupfumi hwehupfumi nekuzvinetsa kwemari. Akataura zvakare kuti Social Security kubhadhara kunogona kunonoka, masoja aisazoziva kuti mari dzavanouya dzaiuya riini uye mitero yemubhadharo pamakadhi echikwereti, zvikwereti zvemotokari uye mogeji dzinomuka.
Yakawanda sei chikwereti iyo iyo US yazvino? Chikwereti chenyika ikozvino chakamira pa $ 28.43 trillion, sekureva kwaPeter G. Peterson Foundation’s live tracker. Kapu yekukwereta yakaiswa pamadhora makumi mana nemasere emamiriyoni emadhora, ichisiya hurumende iine kamuri kadiki-diki.
Sei US ichiganhurira kukwereta kwayo? Zvinoenderana neBumbiro, Congress inofanira kupa mvumo yekukwereta. Muganhu wechikwereti wakavambwa mukutanga kwezana ramakore rechi20 saka Treasure yaisada kukumbira mvumo nguva yega yega painoda kuburitsa mabhondi ekubhadhara zvikwereti.
Dzimwe nyika dzinozviita nenzira iyi here? Denmark zvakare ine muganho wechikwereti, asi yakaiswa yakakwira kwazvo zvekuti kuisimudza kazhinji haisi nyaya. Dzimwe nyika zhinji hadzidaro. MuPoland, chikwereti cheveruzhinji hachigone kudarika makumi matanhatu kubva muzana yezvakakomba zvigadzirwa zvemumba.
Nei kukwidza muganho wechikwereti kwakaoma kudaro? Kwemakore mazhinji, kukwidziridzwa kwedenga rechikwereti yaive tsika. Asi sezvo mamiriro ezvematongerwo enyika ave kuwanda, Congress yanga ichitamba mutambo wezvematongerwo enyika unowedzera nenjodzi pamusoro pechikwereti.
Chingave chiri zano rakanaka kubvisa muganho wechikwereti? Zvinowanzoita kunge njodzi yekukanganisa netsaona inodarika chero mutoro wezvemari uyo muganho wechikwereti unokurudzira. Zvisinei, zvinotora chiito cheCongress kubvisa muganho wechikwereti, uye kuwana chibvumirano hapana kumbove nyore.
NeMuvhuro, VaBiden havana kudzora kukumbira maDemocrat kuti ashandise kuyananisa, asi havana kutsigira zano, zvakare. “Yakazara nemhando dzese dzenjodzi yekukanganisa,” akadaro.
MaDemocrat mazhinji anotya kupa zvido zvaVaMcConnell, vachishushikana kuti zvaizotangisa zvakaipa kutaurirana uye kupa maRepublican mukana wekuwedzera kunonoka kuvhota uye nenjodzi yekumanikidza hurumende kusvika iyo isina mari yakakwana kubhadhara zvikwereti zvaro zvese pazvinenge zvakakodzera.
Achibvunzwa kuti sei VaBiden vanga vachizeza kugamuchira kuyananiswa, Jen Psaki, munyori wevatori venhau weWhite House, akaudza vatori venhau kuti maRepublicans “akange achishandisa sevaya vanofamba nezvikepe” mumakore apfuura VaBiden vasati vatora chigaro uye nekudaro vaive nebasa rekubvumidza vhoti. “Zviri nyore kuti zviitwe, uye hatifunge kuti maRepublicans anofanirwa kuregedzwa,” akadaro.
Nehunyanzvi, United States yakarova chikwereti chayo pakupera kwaChikunguru, zvichitevera kuwedzerwa kwemakore maviri uko Congress yakabvumirana muna 2019. Munyori weHaimari Janet L. Yellen ave achishandisa “matanho anoshamisa” kubva ipapo kunonoka kutadza. Izvo ndezvekushandisa zvemari zvemari zvekushandisa zvinodzivirira kumwe kudyara kwehurumende kuitira kuti mabhiri arambe achibhadharwa.
Mai Yellen vakayambira Congress svondo rapfuura nezve “zvine njodzi” mhedzisiro kana vatongi vemitemo vatadza kumisa kana kukwidza mubairo wechikwereti usati wasvika Gumiguru 18. Kukwidza muganho wechikwereti kunovhara mashandisirwo eCongress akatobvumidza.
Vatungamiriri vezvematongerwo enyika vanoti VaBiden vacharamba vachimanikidza maRepublicans kuti vasiye danho – nekutyora firimu ravo – uye vobvumidza maDemocrat kuvhota vega vhiki ino kuti vasimudzire muganho.
“MaDemocrat anoda kuita basa rese kuti amise,” VaBiden vakadaro. “VaRepublican vanongofanira kutirega tichiita basa redu. Ingobuda munzira. Iwe haudi kubatsira kuponesa nyika? Buda panzira kuti urege kuiparadza.
Iyo yezvematongerwo enyika yemuganhu wechikwereti yakaputirwa mune zvematongerwo enyika bhiri hombe rekushandisa iro maDemocrat ari kuyedza kupfuudza nenzira yekuyananisa, pasina rubatsiro kubva kumaRepublican. VaMcConnell vataura kakawanda kuti kana maDemocrat achida kushandisa nzira iyi kuwedzera mutero nekushandisa, vanofanirwa kuishandisa kukwidza muganho wechikwereti futi.
Iyo ganho remuganho wekupokana ndechimwe chinokanganisa kumutungamiriri wenyika ari kuyedza kuona kudzikwa kwezvikamu zviviri zvemutemo zvinotsanangudza chirongwa chake chemumba. VaBiden vari kuyedza kuita chibvumirano pakati pemapapiro akasununguka uye ane mwero muCongress pamusoro pemabhiri maviri ane angangoita ese mazano aVaBiden ehupfumi, kusanganisira kutsvaira mari nyowani pazvivakwa, dzidzo, kuchengetwa kwevana, kuchengetwa kwemusha vakura uye vakaremara vekuAmerica, dzimba dzinodhura uye nezvimwe. Mutungamiri anozvishongedza semugadziri wezvibvumirano anozviona seakasarudzika chinzvimbo chekutengesa chibvumirano.
Akasundidzira macristrist kushandisa mari inosvika madhora zviuru gumi nezviuru nezviuru zvemabhirioni pane bhiri hombe, akagadziriswa nekuwedzera kwemitero kune vanowana mari yakawanda nemabhizinesi, nepo achiudza vafambisi mberi ivo vanofanirwa kugamuchira zvakaderera pane iyo $ 3.5 tiririyoni yekushandisa uye kutemerwa mutero ivo pakutanga vaitarisira pass, ayo maviri akabata maseneta kunyanya akaramba.
“Ndakwanisa kuvhara chibvumirano pa 99 muzana yebato rangu,” VaBiden vakati, Muvhuro vasati vawedzera kuti “vanhu vaviri” – kureva Seneta Joe Manchin III weWest Virginia uye Senator Kyrsten Sinema vekuArizona – vakasara inopesana nechikamu chechipiri chemutemo. Haasati abudirira kuvanyengetedza, asi vabatsiri vake vanoti VaBiden vane moyo murefu, uye kuti vari kuita zvese zvavanogona kuti nhaurirano dzifambe kuitira kuti vararame.
Vakabvunzwa neMuvhuro kuti vaizotsigira here munhu akaderera pane yekuyananisa pasuru yekuedza kunyaradza maseneta maviri ane mwero, VaBiden vakaramba. “Hachisi chinhu chakangwara kutaurirana newe pamberi pevanhu,” akadaro.
Emily Cochrane akapa ruzivo.
Start a business quickly – DBA Small Business Show 17